ô.cc – Home
Tsy manonona anarana URL
URL tsy mety!
. 1 ora1 andro1 herinandro1 volana1 taona
Oh.cc dia redirector URL tsy mitonona anarana. Alefaso mora ny rohy, ampidiro ao anaty fampiharana manokana. Tsy misy stats, tsy vatan-kazo. Milamina ny tsiambarateloo.
Fa maninona aho no mila manonona anarana sy manome fohy ny URL?
Hampitombo ny tsiambaratelonao ny ô.cc amin'ny alàlan'ny fampiasana referrer banga (dereferer) ho an'ny rohy rehetra atolotrao. Ho fanampin'izany, hanafoanana ny rohyo izy io, hanamora ny fizarana amin'ny haino aman-jery sosialy sy sehatra hafa fizarana hafa. Azonao atao ny manamboatra ny url anao manokana ary mamaritra ny fotoana lany daty. Satria ny tahiry tadiavinao ihany no itehiriziny ihany, ahafahanao manafoana url maimaim-poana.
Inona no dereferer?
Ny dereferer dia teknika iray hamerina ny mpampiasa mankany amin'ny URL iray manokana avy amin'ny pejy iray. Amin'ny ankapobeny, mandefa fampahafantarana (anisan'izany ny referer) ireo mpizara tranonkala rehefa mamindra lalana anao amin'ny pejy hafa. Ny andraikitry ny dereferer dia ny manafina / manala izany fampahalalana izany amin'ny tranokala misy mifandraika. Raha te hanadihady ny vatan'ny tranonkalany ny webmaster dia hampiseho ny dereferer URL fa tsy amin'ny URL niandohana.
1. Apetaho na soraty ny URL anao ao anaty fampidirana.
2. Ampidiro anarana (safidy).
3. Ampidiro ny daty lany daty (safidy).
4. Kitiho ny fohy.
Dia hahazo URL vaovao azonao zaraina sy ampiasao ianao amin'izay!
Ahoana ny fomba fampidirana azy io amin'ny fampiharana azy?
Ampiasao fotsiny ny url https: //ô.cc/? ary ampio ny orinasanao tany am-boalohany.
Ahoana ny fomba famoahana ny URL tena haingana?
Azonao atao ny mampihena sy tsy mahalala anarana haingana ny URL-nao ary tena mora dia mora.
- Manampy ny tsoratadidy manaraka ianao amin'ny tianao indrindra.
- Mandehana any amin'ny tranokala tianao hohafohezina
- Kitiho ny ô.cc ankafizinao noforoninao
- Avy eo!
Sariho ary arotsaho ny bokim-pianaranay ao amin'ny tablanao fitaovana mba hampivoarana url fohy ho anao eo am-pandehanana amin'ny tsindry totozy tsotra.
Ny antsipiriany bebe kokoa!
Maninona no tokony hohafohezina sy tsy fantatra anarana ireo rohy?
Efa manodidina antsika hatry ny ela ny teny URL fohy. Mety tsy ho azontsika mihitsy aza ny fisian'izany. Saingy eo amin'ny lafiny rehetra amin'ny Internet izany. Ny antony voalohany amin'ny fampiatoana rohy dia mora kokoa ny mitadidy an'ireo olona mety mikaroka an'io tranonkala io amin'ny Internet. Andao atao hoe manana rohy ao amin'ny tranonkalanao ianao na rohy mankany amin'ny atin'ny tranokalanao amin'ny URL iray lehibe dia lehibe ary tsy azo lazaina am-bava koa izany.
Andao atao hoe https://example.com/5dc1apgeniune mety ho nahita karazana URL toy izany ianao rehefa mahazo rohy voadika eo amin'ny takelakao amin'ny fitaovanao. Efa tsikaritrareo fa tsy mahavita milaza an'io rohy io ianao amin'ny hafatra ofisialy amin'ny olona rehetra.
Inona no manakana anao amin'ny dingana voalohany amin'ny marketing amin'ny varotra amin'ny rohy. Ary io no tena fototry ny fanafohezan-doka URL izay ahafahanao mahazo ny fahazarana manana finiavana am-bava ary mora vava koa ny rohy izay azonao atao ny mametraka mora sy mizara mora. Ilay mpamorona fitaovana fanamiana dia fantatra ihany koa amin'ny maha-toerana ara-batana azy ny URL ho an'ny votoaty eran'izao tontolo izao.
Ny fizotran'ny fanafohezana ny URL dia miasa amin'ny fomba iray ahafahana mampihena ny isan'ny litera amin'ny rohy iray nefa mbola mahavita mitarika ireo mpampiasa mankany amin'ilay atiny mitovy.
Rehefa mahazo URL lehibe eo anoloanao ianao dia sarotra aminao ny mahatadidy ny ampahany manontolo. Amin'ity tranga ity dia ny fanafohezana ny URL no miasa ho anao mba hampihenana ny tarehimarika ao amin'ny URL nefa mbola mahavita mampilamina anao mankany amina atiny mitovy.
Amin'ny fanaovanao toy izany dia hanana fananganana URL mahafinaritra kokoa ianao eo alohanao izay ho mora kokoa ny mahatadidy ary mora kokoa ny manoratra sy mizara. Ny haavon'ny faran'ny fanafoanana URL ihany koa dia mahavita mampifandray tranonkala maromaro na pejy web maromaro hoana URL tokana.
Ny antony lehibe ao ambadiky ny fanalefahana ny URL dia toa milamina tsara ihany koa ary mora kokoa ary raha tsy misy karazana fahadisoana dia afaka mizara amin'ny alàlan'ny serivisy hafatra mivantana. Manana tombony fiarovana sasany koa amin'ny fiarovana ny toerana sy ny angon-drakitra ary koa manamboatra biby ho amin'ny karazana fidirana manimba. Ny fanamorana ny URL ihany koa dia manamora ny famoronana votoaty mora foana amin'ny search engine.
Aoka hatao hoe manana tranonkala bilaogy ianao amin'ny famoronana dokam-barotra ho an'ny serivisy samihafa izay hizaranao rohy samihafa. Amin'ny alàlan'ny fohy URL dia azonao atao ny manome URL fohy sy dikan-dahatsoratra ary manampy azy ireo amin'ny teny manan-danja indrindra mba ho mora hitan'ny olona ny votoatiny ary afaka misoratra anarana mora foana ao amin'ny Google analytics izy ireo.
Satria manamora ny fifampizarana mizara ireo mpampiasa dia mora ny mifanerasera amin'ny tsipelina ery ary mahatadidy azy ireo mora kokoa. Ny serivisy fananganana URL ihany koa dia manampy amin'ny fahatokisan'ireo mpanjifa ny tranonkalanao. Ny antony lehibe dia amin'ny alàlan'ny fanafoanana ny URL azonao atao ny manana URL mahafinaritra mamaky teny izay mandeha tsara ihany koa amin'ny fitsapana mora vakiana amin'ny atiny an-tserasera. Ary rehefa momba ireo mpamaky boky na publication dia azonao atao koa ny mahazo ny fahazoana ny rohy misy anao ho madio, mba ho hita fa azo itokisana toa azy ho an'ny mpanjifa mety hitranga.
Ny fanafoanana URL tsy fantatra anarana
Ity karazana URL ity dia ilay iray izay nampiasainao hanomezana tolotra fanadihadiana momba ny tranonkalanao nefa tsy manara-maso ny antsipiriany marina na ny antsipiriany momba ilay olona manao fanadihadiana. Ny karazana rohy misy tahaka ireny dia azo alefa mora foana ao anaty mailaka na amin'ny varavarankelin'ny tranokalan'ny tranokalanao na eo amin'ny pejy fandraisam-bahiny aza. Ny fampiasana URL tsy mitonona anarana dia manampy ny tompon'ny tranokala amin'ny fanomezana rohy azo antoka sy amin'ny fiainana manokana amin'ny tranokala, ka ny mpampiasa dia afaka manao fanadihadiana momba ny atiny ary koa mora hamaritana ny hatsaran'ny tranokala.
Ary amin'ny ankapobeny dia manampy amin'ny karazan-javatra manimba hafa amin'ny Internet izy io. Toy ny rehefa mandefa ny rakitry ny tranokalanao manoloana ny karazana votoaty fampiroboroboana ianao, dia azo inoana fa mora zahana ny votoatinao sy ny toerana misy ny votoatanao manerana ny tany eran'izao tontolo izao ary azo ihodivirana ihany koa izany. teny manimba. Raha amin'ny lafiny iray kosa, amin'ny alàlan'ny fampiasana tsy mitonona anarana sy fohy ary dikan'ny URL tena izy, dia manome anao tsiambaratelo fanampiny ary afaka manampy anao hiaro ny votoatinao amin'ny halehiben'izy ireo.
Tena tsara ho an'ireo olona vonona hametraka sy hanodina URL ny votoaty fampiroboroboana ny URL. Misy serivisy fanafohezana URL marobe amin'ny Internet izay mahavita mampiditra anarana URL anao ary ho mora vakiana ihany koa.
Ireo fomba fiasa fanafoanana ny URL dia manaraka ny teknikan'ny http redirect. Ity dia azo ampiasaina amin'ny fanafohezana sy fanaovana endrika an-tranonkala tsy fantatra anarana na amin'ny adiresy IP aza. Ity fomba ity dia mety ho fohy sy ho ambany ary manolo ny sasany amin'ny tarehin'ny URL lava ary mahay manao azy io fohifohy ary dikan-teny ihany koa dia hitazona ny toerana tena mitovy amin'ny tranonkala eran'izao tontolo izao.
© 2022 ô.cc • All Rights ReservedContactPolitika Fiarovana fiainan'olona